မြေတိုင်းမှတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အမေရိကန် ကမ်းခြေ နှင့် မြေတိုင်းမှတ် အနီးကပ်ပုံ
တြိဂံဖွဲ့ မြေတိုင်းမှတ်။ အလယ်တွင်တြိဂံပုံပါဝင်သည်။
အပေါ်ပုံမှ တြိဂံဖွဲ့မြေတိုင်းမှတ်အတွက်ရည်ညွှန်းမှတ်။ အလယ်မှ မျှားသည် အပေါ်ပုံမှ မူရင်း မြေတိုင်းမှတ် သို့ ဦးတည်ညွှန်ပြသည်။
တဲလ်အဗစ် လမ်းပေါ်မှ ခွေးသွားစိတ်ပုံ မြေတိုင်းမှတ်။ အများပြည်သူ အိမ်ခြံမြေ မြေပုံမှတ်တမ်းစနစ် အတွက် အမှတ်အသားအဖြစ် သုံးသည်။
မြေတိုင်းအမှတ်အသားများကို မြေတိုင်းမှတ်များ (survey marks)၊ မြေတိုင်းအထိမ်းအမှတ်နေရာများ (survey monuments)၊ မြေတိုင်း BM များ (survey benchmarks)၊ ပထဝီမှတ်များ (geodetic marks) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို မြေတိုင်းရာတွင် အဓိကကျသော မြေတိုင်းမှတ်များ အဖြစ် မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မှတ်သား ထားရှိသည်။' ၎င်းတို့ကို ပထဝီ မြေ အနေအထား လေ့လာရေး နှင့် မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။  "benchmark" ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို မြေမျက်နှာပြင် အနိမ့်အမြင့်ပြသောအမှတ်အသားများအတွက်သာ သီးသန့်အသုံးပြုသော်လည်း အလွတ်သဘောအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမြေတိုင်းမှတ်များကို "benchmark" အဖြစ်ရည်ညွှန်းအသုံးပြုနေသည်။ တြိဂံဖွဲ့တိုင်းတာခြင်း (triangulation) အတွက်အသုံးပြုသောအလျားလိုက်အမှတ်အသားများကို တြိဂံဖွဲ့မှတ်များ အဖြစ်လည်းခေါ်ဝေါ်သည်။
ကြေးဝါပြားများ၊ အရက်ပုလင်းများ၊ ရွှံ့အိုးများနှင့်ကျောက်တုံးပုံများ စသည်တို့ကို မြေတိုင်းမှတ်များအဖြစ် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။  အချို့သောသမိုင်းဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်အသားများကို တြိဂံဖွဲ့မြေတိုင်းမှတ်များသို့မဟုတ် သုံးနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောနိုင်ငံများ၏ နယ်ခြားဆုံမှတ်များအဖြစ်သုံးခဲ့ကြသည်။ ၁၉ ရာစုက မြေတိုင်းမှတ် အဖြစ်ကျောက်တုံးကျောက်စွန်းများတွင်ဖေါက်၍မှတ်သားထားသော လွန်ပေါက်များ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များတွင် ထွင်းထားသော ကြက်ခြေခတ် သို့မဟုတ် တြိဂံပုံအမှတ်အသားများ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များတွင် မြှုပ်နှံထားသော ကြေးနီ (သို့) ကြေးဝါချောင်းများ ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဘူမိဆိုင်ရာ မြေတိုင်းမှတ်များသည် မြေစိုက်ကျောက်တိုင်၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သတ္တုပိုက်များ၏ ထိပ်ဖျားမျက်နှာပြင်တွင် ဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ထားသော အမှတ်အသားပါသည့် ပုံသွန်းလောင်း သတ္တုပြားများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ မြေတိုင်းမှတ်များ အရှည်တည်တန့်စေရန်အတွက် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေများနှင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ 
ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂိုယာမြို့ ရှိ ရှချီဟိုကိုသတ္တဝါ ((shachihoko) ရုပ် ပုံ မြေတိုင်းမှတ်များမှာ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပုံစံကြောင့်ထင်ရှားသည်။ 
မြေတိုင်းမှတ်များသည် တြိဂံဖွဲ့မြေတိုင်းစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပြီး တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များ အနှံ့စနစ်တကျဖြန့်ကျက် မြေတိုင်းရာတွင် အမှတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ထောင့် များ နှင့် အကွာအဝေးများကို ဖော်ပြပေးသည်။ ထိုသို့သောမြေတိုင်းမှုများသည်ကမ္ဘာအနှံ့မြေပုံရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံဖြစ်သည်။
ဘူမိ မြေတိုင်းမှတ်များကို အုပ်စုဖွဲ့နေရာချထားလေ့ ရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တြိဂံဖွဲ့တိုင်းတာခြင်းတွင် ပထမဆုံးတိုင်းတာရရှိသော အမှတ်ကို တြိဂံဖွဲ့ဆုံချက်မှတ် သို့မဟုတ် ပင်မဆုံချက်မှတ် ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကို အမှတ်အသားအဖြစ် တြိဂံပုံ နှင့် အလယ်တွင် ချိန်သီးမှတ် ထွင်းထားသော အမှတ်အသားပါသည့် ကြေးဝါပြား ဆုံမှတ်ပြား (လက်ဝဲမှာအထက်ဓာတ်ပုံ) တပ်ဆင်ပြီး မှတ်သားလေ့ရှိသည်။ တြိဂံဖွဲ့ဆုံချက်မှတ် ကို ဝန်းရံ၍ ၎င်းဆီသို့ ညွှန်ပြနေသော မြှားပုံအမှတ်အသားများ ပါသည့် ရည်ညွှန်းမှတ်များ (အများအားဖြင့် သုံးမှတ်) ကို နေရာချထားလေ့ရှိသည်။ (လက်ဝဲမှ ဒုတိယဓာတ်ပုံ)။  ဤရည်ညွှန်းမှတ်များသည်နောက်ပိုင်း မြေတိုင်းသူများအတွက်မူရင်း တြိဂံဖွဲ့ဆုံချက်မှတ်ကို “ပြန်လည်ရယူသိရှိနိုင်ရာတွင်” (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရှာရာတွင်) ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ရည်ညွှန်းမှတ်များသည်နှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသောတြိဂံဖွဲ့ဆုံချက်မှတ်ကိုအစားထိုးရန် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်) ကိုလည်းဖန်တီးပေးသည်။
အချို့သောဆုံချက်မှတ်အဟောင်းများကို (ထယ်သွားများကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်) မြေအောက်အနက်ပေများစွာတွင်မြှုပ်နှံ ထားသည်။ ရံဖန်ရံခါထိုမြှုပ်နှံထားသော အမှတ်အသားများအပေါ်တည့်တည့် တွင် မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားများအတူထားရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် တိကျမှု စံနှုန်းများ နှင့် ကိုက်ညီသော မြေတိုင်းမှတ်များ သည် အမျိုးသား ဘူမိမြေတိုင်း National Geodetic Survey (NGS) မှထိန်းသိမ်းထားသော အမျိုးသားဒေတာဘေ့စ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။  ဒေတာဘေ့စ်ရှိဆုံချက်မှတ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ၆ ခုအက္ခရာကုဒ်နံပါတ် PID (အမြဲတမ်းလက္ခဏာ Permanent IDentifier) ရှိပြီး ၎င်းဖြင့် ဆုံချက်မှတ်ကိုဖော်ပြသည့်အချက်အလက်ဇယားကို ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်သည်။  ဆုံချက်မှတ်၏ PID ကိုသာသိလျှင် မည်သည့် ဆုံချက်မှတ်၏ အချက်အလက်ဇယားကို မဆို NGS ရှိ အင်တာနက်အခြေပြုပုံစံ  တွင် ရှာဖွေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အချက်အလက်ဇယားများကိုဆုံချက်မှတ်အမည်ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ 
ပုံမှန်ဒေတာဇယားတွင်တိကျသောသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းထားသည့်ဩဒီနိတ်များရှိသည်။ တိကျသောကိုဩဒီနိတ်များကို "ချိန်ညှိ" ဟုခေါ်ပြီးတိကျသောကွင်းဆင်းမြေတိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများမှရရှိသည်။ ခန့်မှန်းသောကိုဩဒီနိတ်ကို“ စကေး” ဟုခေါ်သည်။ များသောအားဖြင့်မြေပုံပေါ်တွင်အမှတ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်၎င်း၏လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ စကေးကိုဩဒီနိတ်များသည်သူတို့၏အမှန်တကယ်တည်ရှိသောနေရာများမှပေထောင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနိုင်သည်။ အမေရိကန်တွင် အချို့သောမြေတိုင်းမှတ်များတွင် ဆုံချက်မှတ်များ၏လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်အမှတ်အသားများ၊ ရည်ညွှန်းမှတ်များစာရင်း (ဆုံချက်မှတ်မှအကွာအဝေးများနှင့်လားရာများနှင့်အတူ) ၊ (နှစ်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားနိုင်သော) အခြားရည်ညွှန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက် (ဥပမာ - အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းများ၊ သစ်ပင်များသို့မဟုတ်မီးသတ်ရေငုတ်များ) နှင့်ဤအင်္ဂါရပ်များ၏ယခင်အမှတ်အသားများမှအကွာအဝေးနှင့် / သို့မဟုတ် လားရာ၊ အဆိုပါအမှတ်များကိုပြန်လည်ရယူရန် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရှာဖွေရန်) အတိတ်ကကြိုးပမ်းမှုများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်း ( မြေတိုင်းမှတ်ကို ပြန်လည်ပြုလုပ်နေရာချခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၏သက်သေသာဓက) စသည်တို့ပါဝင်သည်။
အသစ်သောမြေတိုင်းမှတ်များ၏တည်ငြိမ်မှုအတွက်လက်ရှိအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာမြေကြီးထဲနက်ရှိုင်းစွာ ရိုက်သွင်းထားသောသတ္တုချောင်း၏ထိပ်တွင် အသားတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သတ္တုချောင်းကို အမဲဆီအလွှာ တစ်ထပ်မံပြီး ထိပ်ကို ကွန်ကရစ် ထိပ်အုပ်စွပ်ထားရသည်။ 
ယခုအခါ မြေတိုင်းမှတ်များကို Differential GPS surveying တွင် GPS လှိုင်းဖမ်းယူသည့်အင်တင်နာအတွက် သိပြီးနေရာစတင်သတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ 
ဘရာဇီးတွင်အလားတူဒေတာဘေ့စ်ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံပထဝီဝင်နှင့်စာရင်းအင်းဌာန  မှလည်ပတ်သည်။
Benchmark (surveying) ၊ အမြင့်ကိုတိုင်းတာရာတွင်ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုသောမြေတိုင်းအမှတ်အသား
↑ A popular hobby, known as "benchmarking hunting", has grown up around the pastime of recovering (or "re-finding") these marks. In the U.S., the hobby hasawebsite that enables hobbyists to plan and report on their efforts.
↑ Foracomprehensive history of these marks in the United States, together with photos of all of the key variations, see the PDF of the article by CDR George E. Leigh, NOAA Corps (Ret’d.).
↑ 18 U.S. Code § 1858 - Survey marks destroyed or removed။ United States။ “Whoever willfully destroys, defaces, changes, or removes to another place any section corner, quarter-section corner, or meander post, on any Government line of survey, or willfully cuts down any witness tree or any tree blazed to mark the line ofaGovernment survey, or willfully defaces, changes, or removes any monument or bench mark of any Government survey, shall be fined under this title or imprisoned”
↑ Survey markers and road ledger markers in Nagoya
↑ These marks were often set at roughly equal (120-degree) intervals from each other and were numbered in ascending order moving clockwise around the main station.
↑ The NGS is the successor agency to the U.S. Coast and Geodetic Survey (USCGS).
↑ Here isasample datasheet that describesatriangulation station with three reference marks. Distances and directions from the station to these reference marks are given in the outlined box on the datasheet. Originally there wereanumber of references to surrounding structures, but these structures were all later reported as destroyed. A later visitor then provided some new references.
↑ The NGS datasheet-from-PID form is located here.
↑ Here is the NGS web-based form for gettingadatasheet forastation withaknown name.
↑ NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration
↑ In the U.S., even though surveys carried out primarily by GPS are becoming more common, the network of physical survey markers continues to provide an important check on the accuracy of GPS-based methods, and one that is not dependent on satellites orbiting the earth.
USGS Marks များကိုရှာဖွေရန်ဘယ် website မှခွင့်မပြုပါ။ ဤ link သို့သွားခြင်းအားဖြင့်သင်သည် DSS ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့် NGS PID ကိုရှာဖွေရန်နှင့်အမှတ်အသားများကို google earth သို့လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်ရန် NGS Marks ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ် သည် Google Maps တွင် NGS စစ်တမ်းအမှတ်အသားများကိုပြည်နယ်အလိုက်မြေပုံထုတ်ပေးသည်၊ ၎င်းအမှတ်အသားများသည်ထိုအမှတ်အသားများကိုအမြင်အာရုံရှာဖွေနိုင်သည်။ Geocaching.com ရှိအမှတ်အသားများ၏စာရင်းများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသုံးပြုသော အမှတ်အသားများအမျိုးအစားများ၏ ဖော်ပြချက်နှင့်သမိုင်း။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြေတိုင်းမှတ်&oldid=518121" မှ ရယူရန်
၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။